Word 2010 က Gradient Fills ကိုသုံးပီး Text လေးတွေကို အလှဆင်ရအောင် ~ မျိုးကို
Word 2010 က Gradient Fills ကိုသုံးပီး Text လေးတွေကို အလှဆင်ရအောင်
23:25 How To, M S Office 2010, Office Tip, Word No comments
Gradient Fills က ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာပေါ်ကစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးတော့ဟုတ်ချင်မှာ ဟုတ်မှာပါ...။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ dreary document လေးတွေကိုတော့ တကယ်ကို အလှဆင်နိုင်ပါတယ်..။ Gradient Fills ကို သုံးပီး လုပ်ဆောင်နိုင်တာလေးတွေကို လေ့လာနေ ပါတယ်ဆိုရင်တော့ Word 2010 ကလည်းလေ့လာစရာတစ်ခု လို့ ပြောရမှာပါ...။
Gradient Fill ဆိုတာကတော့ Text ကလေးတွေမှာ Color အရိပ်ကလေးတွေ ရှိနေတာမျိုး များသောအားဖြင့် အလင်းက အမှောင် ၊ အမှောင်က အလင်း Color ကလေးတွေ တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ မတူညီပဲ ရှိနေတာမျိုးပါ..။
လျှောက်ပြောကြည့်တာပါ..။မှားရင် ပြင်ပေးပါအုံး ...။
1. Blank Document လေးတစ်ခု ဖွင့်လိုက်ပါ..။ ကိုရေးချင်တဲ့ စာလေး ရေးလိုက်ပါ..။ ကျွန်တော်ကတော့ Testing the Gradient Fill လို့ရေးလိုက်ပါတယ်..။
2.ဒုတိယစာကြောင်းကို Highlight လုပ်လိုက်ပါ..။ Font Color Icon လေးကို Click လုပ်လိုက်ပါ...။ Color တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါ။ Red ကို ရွေးလိုက်ပါမယ်..။ခုအချိန်မှာ Sentence အားလုံးရဲ့ စာလုံးလေးတွေဟာ အနီရောင်ဖြစ်နေမှာပါ.။
တစ်ခါတော့ Gradient Fill ဆိုတာကို ရွေးပါမယ်...။
အနက်ရောင် အလယ်လေးနဲ့ရွေးကြည့်ပါမယ်...စာလုံးလေးတွေရဲ့ အလယ်မှာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုနီးကပ်ပီး ပုံးလေး လို ရမှာပါ...။
2.တတိယ မြောက်စာလုံးလေးကို Highlight လုပ်ပေးပါ...။ဒီတစ်ခါတော့ Color ရွေးမယ့်အစား Gradient က More Gradient ကိုရွေးလိုက်ပါ...။
နောက်ထပ် ထပ်နှိပ်လိုက်ပါ...။ Gradient Fill ကိုသွားလိုက်ပီး Preset Color ကိုနှိပ်ပါ. ဒီလိုလေး ရမှာပါ...။
Color Bar ပေါ်က Segment လေးတွေဟာ သူ့ အပေါ်မှာ Click နှိပ်လိုက်ရင် ရပါတယ်..။
Preset Color က ကျွန်တော်က မြှားပြတဲ့ Color လေးကို ရွေးလိုက်တဲ့ အခါ Text လေးက အောက်ကလို ပုံမျိုးလေး ရပါပီ...။
Color Bar ပေါ်က Segment လေးတွေကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲ သုံးစွဲ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်..။ သူရဲ့ Right Side ဘက်မှာ ရှိနေတဲ့ Format လေးတွေနဲ့လည်း
ဒီပုံလေးက တော့Text Outline ရဲ့ ပုံလေးပါ...။
ဒီပုံကတော့ Outline Style ရဲ့ပုံပါ...။
ဒီပုံကတော့ Reflection ရဲ့ ပုံလေးပါ..။
ဒီပုံးလေးကတော့ Glow and Soft Edges ရဲ့ ပုံလေးပါ...။
ကျန်တဲ့ Features လေးတွေကိုတော့ လိုသလို ပြောင်းလဲ စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်...။